Ndingaxela phi ukuxhatshazwa kwezilwanyana kwi-Suffolk County?
Afrika kunye neMbindi Mpuma
Ephakathi kunye neMzantsi Melika
Eunited States Inew york Long Island
by ULinda Tagliaferro
Fumana apho ukubika ukusetyenziswa kakubi kwezilwanyana okanye ukunyanzelwa kwezilwanyana kwiSuffolk County, NY
Ngombulelo, ininzi inja, ikati, ihashe nabanye abanikazi bezilwanyana bazinyamekela abahlobo babo bezilwanyana kwaye banandipha inkampani yabo iminyaka emininzi. Ngelishwa, abanye abantu bahlambela kwizilwanyana. Oku kunombulelo wokugwetywa ngumthetho waseNew York State. Ngaphandle kwezi zilwanyana ezihluphekileyo azikwazi ukuzithetha ngokwabo, kubamelwane nakwabanye ukuba baqaphele okwenzekayo kwaye baxelele oku kubasemagunyeni ukuze imeko ilungiswe.
Yintoni echaza ulwaphulo lwezilwanyana
Ukuze ufunde kabanzi malunga nenkohlakalo yezilwanyana, nceda uvakashele iphepha le-Suffolk SPCA, Yintoni echaza ukuhlukumeza kwezilwanyana? Qaphela ukuba kuhlaselwa kwiNew York State ukuba umntu unenjongo okanye ahlasele ngesilwanyana ngesisa, okanye abulale okanye akonakalise kakubi isilwanyana, okanye enze esinye isilwanyana silwe nomnye. Kwakhona kuyingozi ukuqhubela i-cockfight, apho iindawo zinyango ziqhutyana kunye nababukeli bebhola kwizilwanyana eziza kuphumelela.
Qaphela ukuba abanikazi bezilwanyana kufuneka banike ukutya, ukunakekelwa kunye nendawo yokukhusela efunekayo ukuze kugcinwe isilwanyana kwimeko enempilo. Ukuba uye waqaphela ukuba isilwanyana sinyanzelwanga, nceda wazise oogunyaziwe.
Kwakhona, unokwazi ukuba abanye abantu banenani elikhulu lezinja, amahashe, okanye iinkomo emakhaya abo okanye kwipropati yabo. Ukuba umntu ukhononda ukuba izilwanyana zibonakala zingenasondlo, ezo zilwanyana zinokuhlangulwa kwaye umnini walezi zifuyo angatshutshiswa.
Nceda uqaphele ukuba ukuthutha okanye ukuvalela isilwanyana ngendlela ekhohlakeleyo kubhekwa njengento engeyiyo. Umzekelo, ukuba umntu ushiya ipilisi kwimoto ekhethiweyo kunye neefestile ezivaliweyo phakathi kwehlobo, ukushisa okuninzi kunokubangela ukulimala okanye ukufa kwezilwanyana.
Yintoni ongayenza Ukuba unobungozi bezilwanyana ezimbi
Yintoni ongayenza xa ubona ukusetyenziswa kakubi kwezilwanyana okanye ukunyanzelwa kwezilwanyana?
Ukuba uyazi malunga nokusetyenziswa kakubi kwezilwanyana okanye ukunyanzelwa kwezilwanyana kwiSuffolk County, eLong Island, eNew York, unokuyibika:
I-Suffolk County Society yokuLawulwa kwezilwanyana (i-Suffolk SPCA) ingafumaneka ngokubiza (631) 382-7722.
I-Suffolk County Society ekukhuselweni kwezilwanyana zifumaneka kwi-363 Road 111 eSmithtown, eNew York.
Uluntu oluxhasiweyo lwezoLimo (ii-CSAs) kwi-Long Island
Iindawo ezili-10 ezilungileyo zokutya kwi-Hamptons
4 I-Zoos e-Long Island ukufumana abantwana
Iiklasi zaseLong Island zaseLong Island
Fumana iingubo ze-Halloween kwi-Long Island, NY
5 Iingcebiso Zemizi Yendawo Yase-Long Island
I-Daphne's Restaurant, eBarbados
Ukunikezelwa kweYurophu - iMercedes Benz
Iiyure ezingama-48 e-Ottawa, eCanada: Uhambo olugqibeleleyo
Iidlophu zaseHalloween ezijikeleza iReno neTahoe
Iveki yokuTyeka kweeQueens ehamba phambili
Iziganeko eziphambili zeSeptemba kunye neentlobo zenzeke eVenice, eItali
Ukuqonda kweSanta Claus e-Ukraine
Club Med Punta Cana - Iiklabhu zezingane
UMeru no-Everest: Iimpapasho ziya kwiHollywood
Isixeko saseLong Island (LIC): Abomelwane kunye neMbali
Iiveki ezimbini zeeNkcazo zokuPhumela eMzantsi Melika
I-Grand Canyon National Park, eArizona
Inside Scoop kwi-Sony Pictures Studios Tour
Iimpawu eziMxhenxe zeNdalo ze-Ireland
© 2021 xh.traasgpu.com